ခရစ်ယာန်များအတွက်, မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်ဖြစ်စေမမက, ဒါပေမဲ့ကြှနျုပျတို့ပွုသောအခါကြှနျုပျတို့တုံ့ပြန်မည်ကိုမည်သို့. လုကာခုနှစ်တွင် 4:1-2, ကျွန်တော်တို့ယေရှု၏သွေးဆောင်မှုအကြောင်းကိုဖတ်နှင့်မည်သို့သူတုန့်ပြန်. ဒီနေရာမှာကိုယ့်လအနည်းငယ်ပြန်ငါ့အသင်းမှာကျမ်းပိုဒ်အပေါ်တရားကိုဟောပြောမယ့်အတိုချုပ်တရားဟောချက်ကနေအသံင်. ငါသညျယရှေုသွေးဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုချင်တယ်, သူ၏နာခံမှုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်, ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းထဲကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစား. WE သွေးဆောင်မှု၏ကာလ၌အောက်မေ့စေခြင်းအရာတို့ကိုဘာတွေလဲ? ဒီနေရာမှာအဓိကအချက်များဖြစ်ကြောင်း:
II ကို. အားနည်းခြင်းသွေးဆောင်မှုတွေကိုမှခုနှစ်တွင် Give ဖို့ဆင်ခြေမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်
N-tahir • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂျိမ်း 1:13, “သူစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံသောအခါအဘယ်သူမျှမပြောစေ, “ငါသည်ဘုရားသခင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခံပါ၏”; ဘုရားသခငျသညျဒုစရိုကျခွငျးအားဖွငျ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမရနိုင်ဘို့, သူကိုယ်တော်တိုင်မည်သူမဆိုစုံစမ်းမထားဘူး။”
Ebube_nwadiei • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကငါဆိုသည်ကားရန်ဒီနေရာကိုအပေါ်လာမယ့်ခဲ့သည်အတိအကျဘာ. ဘုရားသခင့သွေးဆောင်မှုကိုမသုံးပါဘူး, ကျနော်တို့ကိုမေးလျှင်မူကားသူကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်မည်.
အမည်မသိ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကကျွန်တော်တို့ကိုသှေးဆောငျလတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဒါပေမဲ့စာတန်ကိုကြောင်းဟုအဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်ကြောင်းလုပ်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိပကတိအားဖြင့်. ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါသညျယရှေုကိုဦးဆောင်. ဘုရားသခင့အားလုံးသွေးဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်, အဆိုပါသွေးဆောင်ကျော်အောင်ပွဲ, ကျနော်တို့ဘုန်းတော်အဘို့ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပင်အပွစျမြား.
BPro_12 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
@ N-tahir @Ebube_nwadiei နောက်တဖန်တပြင်လုံးကိုတရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရန် ကျေးဇူးပြု.. ခရီးစဉ်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်သောမကောင်းမှုဟုမဟုတ်ပါ. သူကရိုးရှင်းစွာဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုကြောင်းပြောနေမယ့်. ငါတို့သည်သူ့ကိုအယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့်တဆင့်စှဲမွဲစေခြင်းငှါဘုရားသခင်ကခွင့်ပြု. ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လိုဆန္ဒများအိပ်နှင့်သူ၏အလိုတော်လက်နက်ချဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, ရလဒ်ကိုယ်တော်နှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်, သူကအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူလိုသည်အဘယ်အရာကိုနောက်ဆုံးမှာအရာဖြစ်ပါသည်. အဘယ်ကြောင့်အခြားသူသူ့ကိုရန်အရေးအပါဆုံးအရာကိုပို့မယ်လို့, မိမိအအလွန်သားတော်ကို, သူမလုပ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုတစ်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံရန်?
က Nathaniel Babalola • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တိကျစွာ. သို့သော်ဘုရားသခင်ကစမ်းသပ်ဖွင့်ကိုအ, သူသည်အာဗြဟံအားပြုရုံနဲ့တူ. အာဗြဟံသည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမခံခဲ့ရပေမယ့်သူကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်